स्व. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको डुब्लि’केट भनेर चर्चा बटुलेका प्रकाश चन्दले पाए फिल्म खेल्ने अवसर…हेर्नुहोस् । – Yuwa Aawaj
माघ ९, २०७७ शुक्रबार 507
Prevकुलमान घिसिङलाई पुन: विद्युत प्राधिकरण दोहोर्‍याउने सरकारको तयारी ! आउनु पर्छ भन्नेले सक्दो सेयर गरौं ।
Nextप्रचण्ड भन्छन् : अबको प्रधानमन्त्री म होइन, शेरबहादुर देउवा हो ।
ठडियो २२ तल्ले धरहरा – ७० जनाले एकैपटक दृश्यावलोकन गर्न सक्ने…तस्बिर सहित ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री अधिकारी भन्नुहुन्छ : जनताको काममा ढिलासुस्ती र अटेर गर्ने छुट अब कसैलाई हुदैन ।
पार्टी नै फुटाएर ओलीतिर जादै माओबादीका यी नेता, पौडेल र शर्मा संग यसरी हुदै छ सहमति !